Ny fihenan'ny gazy karbonika atmosfera (CO2) dia nitombo tsikelikely hatramin'ny Revolisionan'ny indostria (avy amin'ny ampahany 280 isan-tapitrisa [ppm] tamin'ny vanim-potoan'ny preindustrial hatramin'ny 409 ppm ao amin'ny 2019), voalohany noho ny asa ataon'ny olombelona toy ny fandoroana angovo azo avy amin'ny fôsily sy fiovana amin'ny fampiasana ny tany.ref Ny ranomasina dia mandray anjara lehibe amin'ny fampihenana ny CO atmosfera2 amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso momba ny 1 / 4 an'ny CO2 izay navotsotra isan-taona tao anaty rivotra. ref Ity dingana ity dia manampy amin'ny fampihenana ny fiantraikan'ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny fampitomboana ny vokatra, saingy tonga amin'ny vidiny: fanangonana ny ranomasina.
Fifandraisana eo amin'ny fananganana CO. Atmosfera2 avy amin'ny solika fofona mandoro sy ny fihenan'ny sora-piterahana amin'ny haran-dranomasina noho ny fanamafisana ny ranomasina. Atmospheric CO2 dia mihena ny ranomasimbe ary miteraka fihenam-bidy ny kômonio, ka mahatonga ny iyon carbone tsy ho an'ny vatoharan-dranomasina sy ny marika hafa. Kitiho raha hanitarana. Modified from Hoegh-Guldberg et al. 2007.
Fiovana amin'ny Ocean Chemistry
Rehefa CO2 dia voarain'ny ranomasimbe. Amin'ny ankapobeny, ny asidra karbonika dia mivelatra ary misy ny iondrôgôma dia navotsotra, ary vokatr'izany, mihena ny pH amin'ny ranon'ny ranomasina (mahatonga azy ireo ho asidra kokoa). Rehefa navoaka tao anaty ranomasim-ponenana ny ionenan'ny rano, dia mifangaro miaraka amin'ny karônataona izy ireo mba hiorenana bikarbonat. Mampihena ny fatran'ny ionona karbona ity dingana ity. Ny fihenan'ny fiasan'ny karôbiôna misy azy dia olana ho an'ireo sambo mpitrandraka (vatohara, vatosoa, ary vatomamy) izay mila ny iôda karôàna mba hananganana kodiarana sy kirany.
Ny fiovan'ny toetr'andro ao anaty ranomasina dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny saturation fanjakana (ary noho izany ny disponibilita biolojika) karazana karbonona karazana (ohatra: calcite, aragonite, na kalcite avoakan'ny Magnesiana.) ref Any amin'ny faritra maro any amin'ny ranomasimbe, ny ranomasina dia rakotry ny harena an-kibon'ny karôzôma, izay midika fa ampy ny karôzôma kalazo mba hamehezana ny zavamananaina hanamboarana ny taolany sy kirany. Na izany aza, ny fanamafisana ny ranomasimbe dia miteraka faritra maro ao amin'ny ranomasimbe mba hanjary tsy misy fanasitranana amin'ireo karazam-boalavo karazam-bolo ireo, ka manimba ny fahafahan'ny zavamaniry sasany hamokarana sy hihazona ny kirany.
Ny pH an'ny ranomasina ambonin'ny tany dia lavon'ny pH 0.1 hatramin'ny fiandohan'ny Revolisiona Indostria. ref Na dia mety tsy ho toy izany aza izany, dia ny haavon'ny pH logarithmic, ary io fiovana io dia mampiseho ny fampiakarana ny fiveloman'ny 30% amin'ny asidra. Satria mbola mitombo ny CO ny ranomasina2 , dia hihamatanjaka kokoa hatrany izy ireo. Ny pH-n'ny ocean dia nomanina handrotsahana ny singa pH 0.4 fanampiny amin'ny 2100 eo ambanin'ny CO avo2 (nitranga in-1) ref miaraka amin'ny taham-pahavitrihana karibonatika mety hianjera eo ambany ireo izay takiana hanohanana ny fitrandrahana haran-dranomasina. ref Ny fiovana toy izany ao amin'ny siansa karbonin'ny ranomasimbe misokatra dia mety mbola tsy nitranga nandritra ny 20 tapitrisa taona. ref
Raha ny CO anthropogenic2 Ny famoahana dia miteraka fanenanam-batana amin'ny maotina eran-tany, ny fiasa ao amin'ny mizana eo an-toerana dia mety hisy fiantraikany amin'ny simia avy amin'ny ranomasina ihany koa. Ohatra, ny fidiran'ny ranom-boankazo, ny fandotoana rano (ohatra, ny zezika miteraka, ny zavatra simika entina amin'ny fikarakarana rano sy ny herinaratra) ary ny fikajiana ny tany dia afaka mampiakatra ny rano amoron-dranomasina amin'ny farafara avo indrindra noho ny atmosfera CO2 irery. ref
Ny toetry ny NOAA momba ny siansa FACT SHEET: Fanamorana ny ranomandry - 2013
NOAA Fandaharan'asa momba ny dioxide karbonika momba ny tontolo iainana Pacific Ocean
Famintinana ny famonoana ranomandry momba ny fanamorana ny ranomandry 2013